Abakhwabanisi beHatchDAO badonsa isikweletu njengoba iDeFi ibhekene nokunye ukubuyela emuva | ICoinGenius Ibamba Umcimbi we-Virtual Crypto
"Njengokukhiya umnyango akuqinisekisi ukuphepha kwekhaya lakho, ilokhi yamathokheni eqembu leTrustToken ayiqinisekisi ukuthi izikweletu ngeke zidonswe."
Lesi yisitatimende esenziwe nguJeff Kirdeikis, oyi-CEO yeTrustSwap, ngemuva kokuthi ehambele kuTwitter ukuphendula ukugxekwa ngemuva kokuthi inkampani, iHatchDAO, kusolwa ukuthi isebenzise ubuchwepheshe beTrustToken ukuphuma kubasebenzisi bomkhonyovu ngokudonsa imali. UKirdeikis uqhubeke wathi 'akunakwenzeka ngokusobala' ukucwaninga ama-startups usebenzisa uhlelo lwawo lwe-SmartLock.
Lezi yizitatimende ezithokozisayo njengalapho kwamenyezelwa okokuqala ukuthi iHatchDAO izosebenzisa ubuchwepheshe beTrustSwap, eyokugcina ithembise ukuthi umphakathi wakudala manje uzonikezwa 'ukuthula kwengqondo.' Bheka ukuthi kwenzeke kanjani lokho.
Sihalalisela @HatchDAO ngokunikeza umphakathi wabo ukuthula kwengqondo ukuthi amathokheni eqembu labo manje akhiyiwe futhi anikezwe amandla kusetshenziswa iTrustSwaps ehlolwe ngokuphelele yi-SmartLock Technology. https://t.co/bcKZanOAxG pic.twitter.com/kUeFq76zlU
- Ukushintshwa kweTrust (@TrustSwap) September 18, 2020
Eqinisweni, izitatimende zakamuva zibonakala ziphikisana ngqo nesimangalo sabo sangaphambilini sokuba ne-SmartLock Technology 'ehlolwe ngokuphelele'. Ukube ubuzohlola iwebhusayithi yeTrustSwap, ungathola ukuthi ithi inikezela nge-'Gold Standard 'ekwethulweni kwamathokheni ngamalokhi ayo ethimba, angavala amathokheni isikhathi esithile ukunikeza abatshalizimali ukuzethemba ukuthi iqembu likuyo ukudonsa isikhathi eside.
Akumangalisi-ke ukuthi ukuzivikela kweTrustSwap, noma ukuntuleka kwayo, kwagxekwa kakhulu ngamalungu omphakathi we-crypto.
So @TrustSwap Ayisebenzi futhi ngaleso sikhathi futhi yasetshenziselwa ukuthola ukwethenjwa okungamanga kuphrojekthi.
Yebo yaxwayisa uMufasa ngenkinga kaSimba kodwa yehluleka ukubikezela noma ukumisa ukukhashelwa kukaScar. Ekugcineni uMufasa wafa noma kunjalo
- VetBlack Ⓥ (@ vetblack19) September 26, 2020
Futhi uma izingathekiso zeDisney bezinganele, umsebenzisi oyedwa Ubeke amazwana,
“Ukwenza umkhonyovu kuwumsebenzi onzima kulezi zinsuku phakathi kokusebenzisa i-telegram, ukudala iphepha le-lite nokwenza iwebhusayithi. Vumela iTrustwap yenze umsebenzi wakho wokukhwabanisa ube lula ngokunikeza umuzwa ongamanga wokuphepha abasebenzisi bakho abakudingayo ukuze ubakhwabanise kahle. ”
I-TrustSwap ayikuthathanga ukugxekwa okulele phansi, nokho, ngephrojekthi yashesha ukuphendula nge-tweet ngokubaluleka kokwenza umsebenzi wakho ngokuzikhandla, ngenkathi kudwetshwa izingozi ezihambisana nohlelo okukhulunywa ngalo.
Amalokhi eTrustwaps Team Token asebenze ngendlela efanele, kepha ukumane ukhiye amathokheni weqembu akuqinisekisi ukuphepha kwephrojekthi.
Kunezindawo eziningi ezisengozini kuphrojekthi ngayinye, ngaphezu kwalokho okusungulwe ngabasunguli.
Lokhu okuthunyelwe kubeka izindawo okufanele uzibuke pic.twitter.com/DfRgzEGNt2
- Ukushintshwa kweTrust (@TrustSwap) September 25, 2020
Umkhonyovu we-HatchDAO wokuphuma nje ungowamuva phakathi kwemikhonyovu eminingi yokuphuma ehlasele isikhala esanda ngokushesha seDeFi kamuva nje. Ngo-10 Septhemba, ngokwesibonelo, ichibi lezimayini lezimali i-Yfdexf.Okwezimali bakhohlisa abatshalizimali ngemali eyizigidi ezingama- $ 20 ezivalelwe kumthetho olandelwayo.
Ngenkathi isithembiso sama-APY aphezulu siqhubekile nokuheha intshisekelo enkulu ku-DeFi, ubungozi buhlala buphezulu futhi abasebenzisi abaningi bangena kula maphrojekthi ngaphandle kokuqonda ubunzima obubandakanyekayo. Indlela eya phambili kwiDeFi, engaphezulu kwe- $ 10.77 billion USD ekhiyiwe, nakanjani izobandakanya izinga elithile lokuqwashisa nokulawulwa.
Lo moya uxhaswe nguKristi Swartz, uManaging Partner eSwartz, uBinnersley & Associates, otshele OKEx,
"Kudingeka kube nomthetho oyinkimbinkimbi ozosetshenziswa ukuze unikeze ukuvikelwa kwabathengi okwanele, ukuphatha kanye nemigomo eqondisayo kubanini-zinkampani abafisa ukusebenzisa lesi sikhala ngokwethembeka"
Izihloko ezihlobene:ukuhlolwablockchainCeoCommunityumthengiDefiukuphuma imikhonyovuEzezimalienikezaUkubusaBambaisithakazeloAbatshalizimaliUJobeJULANILatestsebenzisaizimaliIzimayini ezinotshwalaUkumayiniichibi lezimayiniOKExONEProjectsuHlelo LokudlulisaRegulationukuphephaumkhonyovuimikhonyovunokuvikelekatechUbuchwephesheyocingoIthokheniAmadokhumentiukwethembaTwitterUSDWHO
Amanani we-Ripple's Non-Profit Organisation Bolsters XRP Amanani: Bika